परम्परागत शैली त्यागेर आधुनिकता तिर लम्कदै छ कृषि प्रणाली
Metro Dainik 2077-जेठ-04 5303
मेट्रो दैनिक, काठमाडौं ।
कृषि क्षेत्रमा नेपाल सरकारले लगानी गरेको अनुदान साच्चै फलदायी भैरहेको छ त ? वास्तविक किसानहरुले नै अनुदान पाएका होलान् त ? कृषिबाट किसानले कति उत्पादन गर्छन् ? बजार मूल्य पाएका छन् कि छैनन् ? बजार व्यवस्थापन कसले कसरी गरेको छ ? यस्तै यस्तै प्रश्नहरु मनमा खेलाउँदै प्रधानमन्त्री कृषि परियोजना अवोलोकनको क्रममा हामी तनहुको आबुँखैरेनी स्थित तरकारी जोनमा पुग्यौं ।
हामी त्यहाँ पुग्दा हाम्रो कौतुहलता मेटाउन प्रधानमन्त्री कृषि परियोजनाका व्यवस्थापक टेक बहादुर चितौरिया र जोनका अध्यक्ष ईश्वर बाबु गौली लगाएत कृर्षकहरु पनि उपस्थित थिए । कृर्षकहरुको उत्साह र त्यहाँ उत्पादित नगदे वाली देख्दा केहि हदसम्म हाम्रो जिज्ञासा त मेटिएकै थियो तैपनि जोनमा आवद्ध किसान सोल बहादुर चितौरे मगरले हामीलाई झन बढि प्रष्ट हुन सहयोग गरे ।
करीब ८ रोपनी जमिनमा खेती गरेका उनले वाली गुणस्तर हेरी मूल्य निर्धारण हुने र श्री मिलिजुली कृषि उत्पादक सहकारी संस्थाले वालीको बजारीकरणमा निक्कै ठूलो योगदान दिएको बताए । मगरले भने, "सहकारीको सहकार्य मार्फत तरकारी बिक्री वितरणमा सहजभएको हो । कृषिमा अनुदान आएपछि सरकारी निकायबाट हामी जस्ता किसानलाई कृषि वालीको विषयमा जनचेतना मुलक तालिम दिने गरेको छ । यस्ता तालिमहरुका कारण वाली पहिला भन्दा बढि उत्पादन हुनाको साथै किसानहरुमा कृषि प्रतिको मोह बढ्दै गएको छ । योजना लागु हुनु भन्दा अगाडि किसानहरु खासै कृषिमा भन्दा अन्य पेशामा आवद्ध थिए । परयोजना आएपछि गुणस्तर र उत्पादन संख्यामा बृद्धि हनुका साथै कृषि पेशामा आवद्ध हुनेको संख्यापनि बढेको छ ।"
पृथ्बी राजमार्गबाट केहि मिटर माथीबाट झट्ट हेर्दा देखिने दृश्य यस्तो ठाउँमा पनि तरकारी जोन हुन सक्छ र भन्ने जस्तो लाग्छ । तर भौगलिक हिसाबले डाडाकाडा भएको भए पनि उक्त स्थानमा हामी पुग्दा लहरे वाली नपत्याउँदो गरि भरीपुर्ण देखिन्थ्यो । प्रधानमन्त्री कृषि परियोजना अन्तरगत संचालित उक्त तरकारी जोनमा पुग्दा सिंचाईको भने ठुलो चुनौती छ जस्तो देखिन्थ्यो । भनिन्छ गरे के हुदैन ? त्यसको उदाहरण त्यहाँ पुग्दा सजिलै अनूभुति गर्न सकिन्थ्यो । सिंचाईको अभावमा पनि त्याहाँका किसानको कृषि प्रतिको लगाव र मोहो भन्ने निक्कै धैरै थियो हामी त्यो देखेर हाम्रो टोली खुव प्रभावित समेत भयो ।
तरकारी जोनका अध्यक्ष ईश्वर बाबु गौलीका अनुसार करिब ६ सय हेक्टर जमिनमा फैलिएको उक्त तरकरी जोनमा पाँचसय किसानले कृषि पेशा मात्र अगालेका छन् । त्यसको अलावा एक हजार भन्दा बढि अन्य पेशा सँगसँगै कृषिमा पनि आवद्ध भएका छन । उनीहरुको भनाई अनुशार व्यवसायीक र्फम हुनेले सरकारी अनुदान पाउने गरेको र फर्म नहुनेले पनि सामुहिक रुपमा अनुदान पाउने गरेका छन् । जोनमा वर्षको तीन वाली उत्पादन हुने गरेको छ । साउन देखी सुरु भई कार्तिक सम्म लगाउने वालीलाई अगौटे वाली भनिदो रहेछ जस अन्तर्गत काउली, बन्दा, टमटर, घिरौला लगायतका रहेका छन् । त्यस्तै मंसिरदेखी फागुनसम्मका वाली मध्यवालीमा पर्दा रहेछन । त्यस समयको वालीमा भने विषादीको प्रयोग गर्न नपर्ने जोनमा आवद्ध कृषक सोल बहादुर मगरले जानकारी दिए ।
चैतदेखी असरसम्म लहरे वाली लगाइने समय रहेछ हाम्रो यस पटकको अवलोकनको अवसर पनि यसै बेला परेको थियो । पृथ्वी राजमार्गबाट करिब ५ सय मिटर पैदलयात्रा पछि देखिने लहेर वालीले साच्चै हामी कृषि प्रदान देशमा छौं भने झल्को दिन्थ्यो । करेला, चिचिन्नो, घिरौला, काक्रो लगायतको तरकारीले भरिपूर्ण देखिने त्यस जोनमा सिंचाईको भने निक्कै ठुलो समस्या देखिन्थ्यो । यस जोनमा आवद्ध प्रत्येक किसानले वर्षमा ५ देखि ८ लाखसम्म आम्दानी गर्ने गरेको अध्यक्ष गौलीले हामीलाई बताए । आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा मात्र त्यस जोनमा १ करोड १८ हजार ५ सय आम्दानी भएको थियो ।
कृषकले पछिल्लो समयमा तरकारी खेतीबाट उचित मुल्य पाउन थालेपछि किसानहरु कृषि पेशामा रमाउन थालेका छन् । श्री मिलिजुली कृषि उत्पादक सहकारी संस्थाको सहयोगमा तरकारी बेच बिखनमा सहि मूल्य पाउने थालेपछि किसानहरुलाई जीविको पार्जनमा समेत ठूलो सहयोग हुन थालेको छ । समय समयमा कृषि तालिम हुने गरेकोले गर्दा पछिल्लो दिनहरुमा आएर विषादी कम प्रयोग गर्ने गरेको कुरा कृषकहरुले हामीसँग छलफलको क्रममा बताए । उनीहरुको भनाई अनुशार उनीहरुले माटोलाई रोटेश्न गरेर हरेक पटक फरक फरक वाली लगाउने गरेका छन् । मिलिजुली सहकारीमा १ हजार ६ सय हारहारी किसान सदस्यहरु आवद्ध रहेका छन् ।
जोनबाट उत्पादित तरकारी वाली मिलिजुली सहकारीले किसानसँग सहकार्य गरी एकमुस्ट खरिद गरी त्यहाँबाट सिधै बजारमा पुर्याउने गरेको छ । सहकारीको र जोनका समेत अध्यक्ष रहेका गौली भन्छन किसानलाई मर्का नपरोस र किसानको तरकारिको उचितमुल्य पाउनु पर्छ भनेर नै हामीले हरेक दिन तरकारीको मुल्य निर्धारण गर्ने गरेका छौं । किसानहरुले बिहान ७ बजे देखी १० बजेसम्म तरकारी ल्याई सहकारीमा जम्मा गर्ने गर्दछन ।
अध्यक्ष गौली भन्छन् "तरकारीको मूल्य निर्धारण गर्दा तरकारीको गुणस्तर हेरी निर्धारण गर्ने गरेका छौं ।" थप्दै उनले भने, "धेरै उत्पादन गर्ने किसानलाई पहिलो, दोस्रो र तेस्रो गरी वर्षमा एकपटक पुरस्कृत गर्ने प्रचलन समेत बनाएका छौं । टाढाबाट आउने किसानलाई विपन्न र गुणस्तर हेरेर हौसला बढाउन समेत पुरस्कृत गरिन्छ । किसान हो तर उसँग जमिन र लगानी गर्ने पुजी छैन भनेपनि सहकारीको माध्यमबाट किसानलाई केहि हदसम्म भएपनि लगानी गर्ने वातावरण सिर्जना गर्ने गरेको छौं ।"
गैरआवासीय नेपाली संघद्वारा सीमा अतिक्रमण विरुद्ध हस्ताक्षर संकलन सुरु
रुग्ण उद्योग सञ्चालनमा ल्याउने सरकारको तयारी
टन्सिलबाट कसरी बच्ने ?
डिजिटल नेपाल बनाउने महाभियानमा छौँ : प्रम